Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 16, 2019 00: 40 No Comments
Le Titanic sidaas darteed ka tagay sheeko masraxa. Tani waa sababta:
Leonardo DiCaprio waxa uu sameeyay filim guuritaan;
Singer Québécoise Celine Dion wuxuu heestaa heeso caan ah;
Heesaha Congolese (DRC) JB Mbiana wuxuu heegan u ahaa albaabkii oo dhan oo ka dhigay isaga oo ka hadlaya; iwm.
Ka bilowdan xagga sare, fadlan ka jawaab su'aasha yar ee aqoonta guud si aad u tijaabiso aqoontaada. Le Titanic ku dhex dhacay:
E) Ha khiyaanayn. (ha raadin internetka.)
Sidee Kamet u noqday Masar "duulaanka ka yimid waqooyiga": Asal ahaan, ma jirin tartan cadaan ah oo ka socda qaarada Afrika, tartanka loo yaqaan 'leucoderma (white') wuxuu caadiyan u dhashay buuraha Caucasus, sida Turkiga, Kurdiyiinta, Armeniaanka, Afgaanistaan, Iiraaniyiinta, Berbaradii Arabized ee maanta
Sep29 08: 07